Neovim 0.5 inouya nerutsigiro rweLSP, kusimudzira kweLua uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore angangoita maviri ekuvandudza kuvhurwa kweshanduro nyowani yeNeovim 0.5 yakaziviswa (davi reVim mupepeti, iro rakanangana nekuvandudza kusagadzikana uye kushanduka), iyi vhezheni represents dzinosvika zviuru zvina zvisimbiso kubvira v4000.
Izvo zvinotaurwa kuti mune iyi nyowani vhezheni yeNeovim 0.5, izvo zvakakosha zvinosanganisira tsigiro yeLSP, maAPIs matsva emakwenzi akawedzerwa (ine byte resolution shanduko yekutevera) uye bhajeti yekushongedza, pamwe ne kuvandudza kukuru kune lua se plugin uye gadziriso.
Kune avo vasingazive nezveNeovim, vanofanirwa kuziva izvozvo Pasi pechirongwa, iyo Vim codebase yakagadziridzwa kweanopfuura makore manomwe, semhedzisiro yeiyo shanduko dzakaitwa kurerutsa kodhi yekuchengetedza, kupa nzira yekukamurwa kwevashandi pakati pevachengeti vakasiyana, kupatsanura chinongedzo kubva kuchikamu chepasi (chinongedzo chinogona kuchinjwa pasina kubata vekunze) nekushandisa nyowani inowoneka yekuvaka-yakavakirwa.
Pakati penyaya dzeVim dzakatungamira mukugadzirwa kweNeovim ndeye monolithic codebase yemitsara inopfuura mazana matatu ezviuru zveC.Vanhu vashoma chete ndivo vanonzwisisa zvese nuances yeVim codebase, uye shanduko dzese dzinodzorwa nemuchengeti., Zvichiita kuti zviome chengetedza nekuvandudza mupepeti. Panzvimbo pekodhi yakadzika mukati meiyo Vim musimboti kutsigira iyo GUI, Neovim anoronga kushandisa yepasirese dura iyo inokutendera iwe kuti ugadzire maficha uchishandisa akasiyana maturu ekushandisa.
1 Main nhau yeNeovim 0.5
1.1 Maitiro ekuisa NeoVim paLinux?
Main nhau yeNeovim 0.5
Iyi vhezheni itsva inopa yakawanda shanduko yeiko zhinji dzeshanduko idzi dzakanangana nekuvandudzwa kweLua, maAPI matsva uye kugadzirisa mukugadzirisa uye ndizvozvoe inosimbisa rutsigiro rwakawedzerwa rweLua semutauro wekuvandudza plugin uye kugadzirisa manejimendi.
Pane shanduko dzese dzinonyanya kumira, tinogona kuzviwana LSP mutengi akawedzerwa (Mutauro Server Protocol) yakavakirwa muLua, iyo inogona kushandiswa kubatana kune ekunze masevhisi ekuongorora uye kupedzisa kodhi.
YemaAPIs, imwe inomira kunze kuti yakawedzerwa kudzora dhizaini yezvimedu sarudzo bhokisi, pamwe neAPI yekushandisa akawedzera ma tag kuteedzera shanduko padanho remunhu byte.
Uyewo kuyedza rutsigiro rwemuti-rwunopihwa sey syntax injini, inosanganisira imwe yakavakirwa patsva yepakati APIs yekuteedzera kwekuteedzera uye kushongedza.
Pakupedzisira en maererano nekugadzirisa:
Fixed pasting yemabhuroko asiri kushanda nemazvo
Yakagadzirisa iyo mbeveve maitiro e nvim_exec ()
Yakagadziriswa mabegi mazhinji akawanikwa neconcang uye kufukidza
Troubleshooting terminfo matambudziko muWindows
Solution ine kukwana uye pleat skrini
Troubleshoot inoratidza terminal mhuri
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni itsva, unogona kutarisa shanduko muiyi inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa NeoVim paLinux?
Iye zvino yeiyo yekuisa kesi yeiyi vhezheni itsva muLinux, uyeIzvo zvakakosha kusimbisa kuti Neovim iri mukati mevazhinji kubva kunzvimbo dzekuchengetedza yekuparadzirwa kwakakurumbira.
Kunyange chinetso chete parizvino ndechekuti iyo vhezheni itsva haina kuvandudzwa parizvino mune zvinyorwa zvekuwanda kweLinux.
Kubva parizvino chete Arch Linxu uye zvigadzirwa zvayo ivo vatove nekuwanikwa kwepakeji iyi.
Kuisa pane Arch uye zvigadzirwa, ivo vanongofanirwa kuvhura terminal uye mairi ivo vanonyora unotevera kuraira:
Nguva kune avo vanoshandisa Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa zvinogona kuisa iyo nyowani pasuru nekukurumidza painongowanikwa kuuraya muterminal murairo:
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veFedora uye zvigadzirwa:
Vashandisi ve OpenSUSE:
Pakupedzisira kune vashandisi veGentoo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Neovim 0.5 inouya neLSP rutsigiro, Lua zvinowedzera uye nezvimwe
Red Hat CEO Jim Whitehurst anosiya chigaro semutungamiri weBMM